अभिकर्ताको पेशा जोखिममा, बैंकले नै बीमा गरिदिने ? ऐनमा नै नभएको बैंकास्योरेन्सलाई प्रोत्साहित गर्दै बीमा समिति ! – Insurance Khabar
अभिकर्ताको पेशा जोखिममा, बैंकले नै बीमा गरिदिने ? ऐनमा नै नभएको बैंकास्योरेन्सलाई प्रोत्साहित गर्दै बीमा समिति !
प्रकाशित मिति : १४ माघ २०७५, सोमबार १३:२९
अबका दिनमा अभिकर्ताको पेशा जोखिममा पर्ने देखिएको छ । बैंकहरुले नै धमाधम इन्स्योरेन्स गर्न थालेपछि बीमा कम्पनीका अभिकर्ताको जागिर चट हुने देखिएको छ ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी बीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता भएका समाचार धमाधम आउँन थालेको छ । ऐनमा नै नभएको व्यवस्थाको बिषयमा प्रचार प्रसार गर्दा बीमा समितिमो ध्यान भने खिचिएको छैन । उल्टै मौन बसेर बंैकास्योरेन्स भनेर प्रचार प्रसार गर्न प्रेरित गरेको छ । समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व निर्देशक चिरञ्जीवी चापागाईको नियुक्ती पछि बैंकले बैंकास्योरेन्सका प्रचार प्रसार बढ्न थालेको छ ।
बीमा समितिले बैंकास्योरेन्स नीति ल्याएर अभिकर्तालाई सकेसम्म पन्छाउँन खोजेको देखिन्छ । अभिकर्ताले धेरै कमिशन र बोनश लिएको भन्दै समय समयमा हुने आन्दोलनलाई समेत नियन्त्रण गर्न समितिले बैंकास्योरेन्सको नीति अघि सारेको हो । तर, प्रस्तावित बीमा विद्येयक छलफलमा नै भएका कारण समितिले बैंकास्योरेन्स नीति ल्याउँन ढिलाई गरेको हो । उता अभिकर्ताहरु भने समितिले यस्तो नीति ल्याएमा लाईसेन्स सबै समितिमा बुझाउँने बताएका छन् ।
ऐनमा नै नभएको बैंकास्योरेन्सका कारण अहिले बैंकका कर्मचारी पनि तनाबमा परेका छन् । बैंकहरुले आफना कर्मचारीलाई बीमाको लक्ष्य दिन थालेपछि कर्मचारीहरु तनाबमा परेका हुन् । बैंकले बीमाको लक्ष्य प्राप्तीको लागी दैनिक तनाब दिने गरेको एक बैंकका कर्मचारीले बताए ।